Gurukota rezvemagariro evanhu Muzvinafundo Paul Mavhima
Apo hurumende iri pakati pekuvandudza mitemo ine chekuita nemudyandigere vamwe vanhu vari pamudyandigere vari kuchema kuti vave kudya nhoko dzezvironda sezvo mari dzavanowana dzisingavakwanire.
Vanoti kuchinja chinja kunoita hurumende mitemo ine chekuita
nezvehupfumi ndicho chimwe chezvikonzero zvikuru zviri kuita kuti vaone nhamo iyi.
VaMunyaradzi Mukwada vakashanda kwemakore anoda kusvika makumi mana mukanzuru yeguta reBulawayo. VaMukwada avo vanove nhengo yeBulawayo City Pensioners Association, vanoti vaive nebasa raivawanisa muhoro waive wakanaka zvikuru zvekuti vakakwanisa kuita zvinhu zvakawanda kusanganisira kutenga imba nemotokari mbiri.
Asi pari zvino VaMukwada ndemumwe wevanhu vakwegura vari pamudyandigere vari kurarama hupenyu hwehwakumukwaku nekuti mari yepenjeni yavari kuwana haivakwanire.
Vanoti pavaishanda vaibatirwa mari yakawanda zvikuru yepenjeni uye nyika payakashandisa mari yekuAmerica mugore ra2009, penjeni yavo yaibatwawo iri mumari yemadhora ekuAmerica.
VaMukwada nevamwe vavo havanzwisise kuti sei vari kuwana mari yemudyandigere shoma kudai vachiti havafari nemashandiro anoita mapoka naoziikanwa kunzi Pension Fund ayo ari muzvikamu zvehupfumi zvakasiyana-siyana munyika.
VaLucas Munyika vakashandawo kwemakore akawanda kukambani yeZimbabwe United Passenger Company kana kuti ZUPCO. VaMunyika avo vanove nhengo yesangano rinorwira kodzero dzekuti vashandi vawane mari yemudyandigere yakafanira reZimbabwe Pensions and Insurance Rights Trust, ZimPIRT, vanoti huwori ndechimwe chinhu chikuru chiri kuita kuti vanhu vari pamudyandigere vasawane mari dzakaringana sezvakafanira.
Retired Colonel Brian Sipambi ndemumwe weavo vari pamudyandigere. VaSipambi vanoti kuve pamudyandigere chinhu chaiyemurika asi vanoti nekuda kwekuchinja-chinja kwemitemo ine chekuita nezvehupfumi munyika ruzhinji rwevanhu vari pamudyandigere rwuri kurarama hupenyu hwakaoma.
Vanoti shuviro yavo ndeyekuti dai hurumende yaisa mutemo wekuti imwe mari yemudyandigere ive iri mumadhora ekuAmerica.
Pasi pemitemo yemunyika vanhu vaose vanoshanda mumakambani kana muhurumende vanobatirwa mari inoenda kuNational Social Security Authority kana kuti NSSA, uye vanozopiwa chidimbu chemari iyi
sechikamu chepenjeni kana vachinge vasiya basa.
Asi pave nenguva vanhu vakawanda vachinyunyuta kuti mari iyi haina zvainokwana.
VaFelix Chari mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvehupfumi uye muongorori wezvehupfumi kazvimirira. VaChari vanoti kusagadzikana kwezvinhu munyaya dzezvehupfumi ndciho chikonzero chikuru chiri kuitakuti mari yevanhu vari pamudyandigere pamwe nevamwe vanhu vose munyika
Mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions VaPeter Mutasavaudza Studio 7 kuti vari pamudyandigere vave nenguva vachirarama hupenyu hunonzwisa tsitsi zvisinei kuti vanenge vapedza makore akawanda vachishandira nyika, vachishora hurumende iyo vati inofanirwa
kugadzirisa izvi nekukasika.
Gurukota rezvemabasa VaPaul Mavima vaudza Studio 7 parunhare kuti hurumende iri kuita zvose zvainogona kuti ikwidze mari inotambirwa nevanhu kubva kuNSSA kuti isvike pamadhora makumi matanhatu emari yekuAmerica.
Pari zvino vanhu vari kutambira madhora makumi mavirinemashanu uye VaMavima vati mari iyi ichawedzerwa kusvika pamadhora makumi mana munguva pfupi iri kutevera yozosvitswa pamadhora makumimatanhatu pakunopera kwegore.
Kune vamwe vari pamudyandigere vanoshorawo boka reInsurance and Pensions Commission kana kuti IPEC iro rinoongorora mashandiro emakambani ane chekuita nepenjeni pamwe neinsurance, vachiti harizi kuita basa nemazvo izvo vanoti zvinoitawo kuti vanenge vave pamudyandigere vasawane mari dzavo dzakafanira.
Asi mutauriri weIPEC VaLloyd Gumbo vanopikisa maonero aya vachiti boka ravo range risina masimba akakwana kuti rinyatsoita basa raro nemazvo.
Nekuda kwematambudziko akasangana neveruzhinji munyaya dzemapenjeni neinsurance, mugore ra2015 hurumende yakaumba komisheni yaitu ngamirwa naJustice George Smith yekuita ngororo yekuona kuti vanhu vaifanirwakubdharwa mari dzepenjeni nedzeinsurance vaifanirwa kuwana mari idzi sei sezvo hurumende yakambochinja mari inoshandiswa munyika.
Ongororo iyi iyo yakatarisa zvakaitika pamakore makumi maviri kubva mugore ra1996 kusvika mune ra2016 yakaitwa kubva muna 205 kusvika muna 2017 uye yakaratidzawo pachena kuti kuchinja chinja kwemitemo ine chekuita nezvehupfumi kwakakanganisa zvikuru mabasa ezvemapenjeni
Pari zvino paramende iri mushishi kuvandudza mutemo une chekuita nezvemapenjeni kana kuti Pension and Provident Funds Bill.
Muzvare Thokozani Khupe inhengo yekomiti yeparamende inoona nezvemari nekusimukira kwehupfumi uye vanoti vanotarisira kuti kuvandudzwa kwemutemo uyu kuchabatsira.
VaGumbo vanotiwo vanofara kuti mutemo uyu unotsvagawo kupa boka reIPEC simba izvo vanoti zvichabatsirawo kuti boka iri riite basa raro
Zvichaonekwa mukufamba kwenguva kuti kuvepo kwemutemo uyu kuchabastira here kuti vari pamudyandigere vararame hupenyu huri nani kana kuti kwete.